Ahoana ny fomba ilazana amin'ny olona tianao izy (ary TSY manimba ny finamanana) - Fifandraisana
Ahoana no fomba ilazana amin'ny olona tianao izy ireo (ary TSY manimba ny finamanana)
Manana ve ianao mankahala olona ?
Manana ve ianao nianjera tamin'ny lohany tamin'ny fitiavana miaraka amin'izy ireo, raha mbola izy ireo, raha ny fantatrao, tsy mahalala tanteraka ny fihetsem-ponao.
Betsaka amintsika no saro-kenatra tsy hilaza ny tanjon'ny fitiavantsika ny zavatra tsapantsika momba azy ireo satria tsy azontsika antoka Ahoana handeha manodidina azy.
Mandresy lahatra ny tenantsika isika fa ho hitan'izy ireo tsy ho azy izany na hoe efa tena mahalala tanteraka izy ireo fa tsy liana fotsiny.
baolina afo lehibe wwe
Amin'ny vanim-potoanan'ny fiarahana amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny Internet, maro amintsika no mbola tsy sahy miteny mialoha momba ny zavatra tsapantsika.
Saingy, indrisy, io fomba fiasa io dia mety matetika midika fa misy olona mahavariana mandalo antsika , voafandrik'ireo izay dia vonona ny hanao ny marina momba ny zavatra tsapan'izy ireo.
Cliché na mety izany aza,fohy loatra ny fiainana, ary raha miandry zavatra tonga hatrany aminao ianao fa tsy mivoaka sy misambotra azy ireo ho anao, dia saika tsy hahita ianao.
Raha nanapa-kevitra ny handray ny omby amin'ny tandroka ianao ary hanome azy io, dia mety hanontany tena ianao hoe inona ilay lalana marina ny mandeha amin'io dia.
Raha manahy ianao sao manahirana na resy lahatra dia ho sendra mahatsiravina ianao, tsy mila izany.
Vakio hatrany ny toro-hevitra vitsivitsy vitsivitsy momba ny fomba hanazavana ny fahatsapanao ny olona iray kristaly.
1. Aza atao raharaha lehibe.
Tsy mitovy ny toe-javatra rehetra, ary misy antony maro samihafa mety hieritreretanao fa sarotra ny tonga madio amin'ny fihetseham-ponao.
Mety manahy ianao ny amin'ny fanimbana ny finamanana manan-danja, mety misy ny exe tafiditra, mety hiara-hiasa ianao… ireo zavatra ireo dia mahalana.
Fa raha ataonao foana ao an-dohanao izany ary mifantoka amin'izay mety tsy mety, zavatra mety dia mandeha diso.
Tadidio fa raha mandeha amin'ny laoniny tsara ianao ary tsy manao tantara an-tsehatra amin'izany, dia hanohy ho toy ny taloha ianao, amin'ny maha-mpinamana anao, na hahazo daty hialana amin'izany.
Raha manangana azy be loatra ianao dia mametraka ny tenanao ho lavo. Raha, izany hoe, mahazo ny tsinay ianao raha manao izany rehefa avy natahotra ny momba izany ianao.
Ampahatsiahivo ny tenanao fa, na inona na inona mitranga, hitodika hatrany izao tontolo izao, ary hitohy na tsy misy an'io olona io ny fiainanao.
2. Manapa-kevitra raha hanao izany amin'ny fomba manokana na amin'ny alàlan'ny lahatsoratra.
Safidinao manokana ny fanaovana azy manokana na mandefa hafatra ho azy ireo, satria samy manana ny tombony ananany ny fomba roa.
Raha mampatahotra anao ny eritreritra ny manontany azy ireo ary lavitra loatra ny mifanatrika, dia tsara izany.
Mety hahatsapa ho cop-out izy io, fa ny tombony azon'ity fomba ity dia tsy mila mamaly eo noho eo izy ireo.
Raha toa ny fahagagana tonga tampoka amin'izy ireo, ny fandraisana hafatra dia midika fa manana fotoana kely hieritreretana izy ireo, izay hery mampitombo ny fahafahanao ho eny.
Etsy ankilany, raha fantatrao fa ny fandefasanao hafatra dia hametana anao amin'ny telefaoninao ary ho lasa adala kely mandra-pahazoanao valiny farany ... aza asiana izany ny tenanao!
Misy ihany koa ny ady hevitra matanjaka amin'ny fanaovana azy manokana. Raha resaka raharaha ao am-po no zava-dehibe dia ny fahaizana mamaky ny fihetsiky ny olona sy ny tenin-dry zareo, ary ny hahafahan'izy ireo mamaky ny anao.
Ny filazanao izany amin'ny endrik'izy ireo dia midika koa fa, rehefa avy sahy nanao izany ianao, ho fantatrao ny fomba iray na ny iray hafa.
Ho fantatrao amin'ny lalina izay lalana mety aminao.
3. Fidio ny fotoananao.
Raha manapa-kevitra ny handefa sms amin'izy ireo ianao, dia (nefa tsy izany KOA stalker-esque) alao antoka fa manao izany ianao amin'ny fotoana iray izay toa afaka izy ireo, fa tsy mivoaka sy mandehandeha.
Anontanio izy ireo hoe manao ahoana izy ireo amin'ny voalohany, ary raha ny valiny dia hoe sahirana be na reraka izy ireo dia avelao amin'ny fotoana hafa izy io.
Raha ataonao manokana izany dia ataovy rehefa ianareo roa ihany dia mipetraka na mandehandeha any amin'ny toerana mangina ianao. Ny kafe na zaridaina dia mety.
4. Ataovy ASAP.
Mety efa ela ianao no nifoka tamin'ity olona ity. Na izany aza, raha zavatra vaovao dia manaova soa ho anao ary esory amin'ny fahorianao!
Ny fanaovana izany faran'izay haingana dia midika fa, raha tsy mamaly izy ireo dia azonao atao ny manapotsitra ny fahatsapanao ao anaty kibony alohan'ny hivoarany bebe kokoa.
Ary raha hoy izy ireo eny, midika izany fa ho afaka hanohy hankafy ny orinasan-dry zareo haingana kokoa ianao aorian'izay.
mifandray i samoa joe sy romana
Tsy fantatrao velively izay nanjo ny lahatra ho anao, koa aza avela handalo ny fotoana sarobidy amin'ny rantsan-tananao.
5. Tazomy ho anao.
Mety ho variana kely fotsiny ianao, fa miezaha hanao araka izay fara herinao atao anaty.
Na izany na tsy izany, lazao amin'ny namanao akaiky indrindra, fa angamba sorohy ny filazanao namana namana miaraka amin'ilay olona resahina aminao.
Raha tokony hiresaka amin'ny olona izay hihaino ny fitiavanao an'ity olona ity fotsiny ianao dia teneno izy ireo!
6. Omeo toky ny tenanao.
Raha mbola tsy sahinao ny manazava ny fihetseham-ponao dia mety ho fampiroboroboana ny ego kely izay ilainao.
Izahay rehetra amin'ny ankapobeny dia be fanakianana bebe kokoa amin'ny tenantsika noho ny an'ny olon-kafa, koa maninona raha lazaina amin'ny namanao akaiky indrindra fa mijaly kely ny fahatokisanao tena ary asaivo lazainy aminao ny zavatra tian'izy ireo momba anao.
Ampahatsiahivo ny tenanao fa, na manintona anao ity olona manokana ity na tsia, dia olona tsy mampino ianao izay mendrika - ary hahita - fitiavana.
7. Asao fotsiny izy ireo hampiaraka amin'ny daty voalohany.
Raha tsy hoe be pitsiny ny toe-javatra misy eo aminao, ny vaovao tsara dia mety tsy misy ilana anao manondraka ny fonao amin'izy ireo amin'ny karazana fanambarana romantika.
Ny fametrahana ny zavatra tsapanao dia mety hampatahotra azy ireo fotsiny, indrindra raha avy amin'ny manga tanteraka ho azy ireo izany.
Ny daty iray kosa dia tsy mampatahotra lavitra.
Tadidio fa efa ela ianao no namelatra ireo fahatsapana ireo, saingy mety tsy mbola nieritreritra an'izany taminao izy ireo raha tsy tamin'ny fotoana nanoloranao hevitra hisotro.
Raha mandeha tsara ny raharaha dia misy fotoana bebe kokoa noho ianao miaiky ny fitiavanao mandroso hatrany amin'ny tsipika, rehefa mety ho vonona kokoa amin'izany izy ireo, dia manaiky azy na mamaly azy io mihitsy aza.
Amin'ity dingana ity, ny hany ilainao amin'izy ireo dia eny na tsia tsia.
inona ny tanjona efatra amin'ny psikolojia
Fanasana milamina izay manazava fa manontany azy ireo amin'ny daty iray ianao - angamba rehefa avy nanao chat chat - dia izay ihany no takiana.
Zavatra manaraka ny andalana, “Te haka sakafo hariva ve ianao indraindray, mihoatra ny sakaiza?”
Izany dia mihoatra ny ampy hampitana fa tianao izy ireo nefa tsy mila mandefa azy io akory ianao.
Midika koa izany fa afaka miteny mora foana sy tsotra fotsiny izy ireo ary mihomehy, raha tiany, ary samy afaka miroso sy mijanona ho mpinamana tsy misy fahasarotana.
8. Ataovy mazava ny zavatra, fa aza variana amin'ny teny marina.
Misy zavatra roa tadidio eto. Voalohany, alao antoka fa ny fiteny nofidinao dia manazava fa tsy hoe mangataka kafe fotsiny amin'izy ireo ianao amin'ny resaka mahafinaritra. Ianao dia te hisoroka ny faneken'izy ireo amin'ny fanentanana diso anao.
Raha tsy takatr'izy ireo ny fikasanao dia ho sendra zavatra ny raharaha rehefa tsapany amin'ny farany fa samy hafa amin'ny pejy hafa tanteraka ianareo roa. Ny fampiasana ny teny hoe 'daty' dia manampy foana.
Etsy ankilany, aza variana amin'ny zavatra holazainao ary aza manandrana mamorona andalana mahafinaritra. Izay mety tsara amin'ny sarimihetsika dia mahalana no mandeha amin'ny tena fiainana. Ny tsotra dia tsara kokoa.
9. Omeo fe-potoana farany ny tenanao.
Raha toa ka efa nijanona tsy nanontany azy ireo nandritra ny fotoana kelikely ianao ary manohy miala tsiny, manomezà ny tenanao amin'ny alàlan'ny fametrahana fe-potoana farany.
Aleo lazaina ho marina, io fotoana ‘tonga lafatra’ nandrasanao io angamba tsy hiseho mihitsy, noho izany ianao dia tsy maintsy misafidy ny fotoanao fotsiny ary mitady azy.
Na faran'ny herinandro, faran'ny volana, na alohan'ny tsingerintaona nahaterahanao, dia aza avela handany fotoana foana.
10. Avy eo, omeo toerana kely izy ireo.
Raha nilaza izy ireo fa nanaiky tamina daty iray ianao dia omeo toerana kely handevonana ny zava-nitranga.
Amin'ny fomba rehetra, andefaso sms izy ireo hampiorina ny antsipirian'ny datinao, fa avelao izy ireo hanodina ny zava-misy fa nolazainao azy ireo fa tianao izy ireo, ary omeo fotoana izy ireo hahafaly ny fihaonanao!
11. Miomana amin'ny fandavana.
Raha tsara foana izany mahaiza manantena zavatra tsara , amin'ny toe-javatra toy ireny dia mitombina foana ny fiomanana amin'ny fandondonana.
Raha naman'izy ireo ianao dia ataovy mazava tsara fa zava-dehibe aminao ny fisakaizanao, ary ny zavatra farany tianao hatao dia ny manahirana azy.
Mety ho somary tery ihany ny raharaha mandritra ny herinandro manaraka raha milaza izy ireo tsia, raha mitandrina ianao mba tsy hanova ny fomba fitondranao azy ireo , tokony samy hiverina tsy ho ela eo amin'ny fifandraisanareo taloha ianareo roa.
Miezaha hahazoana antoka fa ianao tsy ilay manao zavatra mahasosotra, na dia tsy tonga saina aza ianao.
Misy tokoa, trondro be dia be any an-dranomasina ary fitiavana be dia be izay mbola hitanao, ary ny fifankatiavana dia tokony hotadiavina.
Na dia mety ho toa izany aza ianao rehefa ao anaty matevina ianao, ny fandavana dia azo antoka fa tsy faran'izao tontolo izao, koa ataovy izay farany azonao atao mba hitazomana ny toe-javatra.
Indraindray dia afaka manampy ny miresaka amin'ny olona momba ny tahotrao ary mahazo drafitra lalao amin'ny fomba hanatonana ilay olona tianao. Eo no miditra ny Hero Heroes. Mifampiresaka an-tserasera amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana momba ny fifandraisany izao raha mila toro-hevitra iray avy. Tsotra.
Ahoana no ahafahanao miteny amin'ny olona tianao fa tsy milaza izany?
Na dia milaza mazava tsara aza ianao hoe ny fomba mety indrindra dia azonao atao ny mampiasa fehezan-teny hafa foana hanoroana ilay olon-kafa fa tena ankafizinao ny fiarahan'izy ireo. Raha ny marina, ny fitenenana tsotra hoe: 'Tena tiako ny orinasanao' dia toerana tsara hanombohana.
Andian-teny hafa azonao andramana atao: 'Tiako ny miaraka aminao,' 'Ankafiziko foana ny tenako rehefa eo ianao,' 'Mahafinaritra anao tokoa ny miaraka amiko,' ary mahatsapa tena tsara ianao eo akaikinao. ”
Ahoana no ahafahanao milaza fa tianao ny olona iray?
Raha mbola tsy vonona ny hiteny ny zavatra tsapanao ianao dia misy fomba hafa ahafahanao manome an'ity olona ity famantarana izay tianao. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra dia ny fanomezana dera azy ireo. Ireo dia mety ho tsotra toy ny milaza aminy fa tsara ny endriny ankehitriny.
Na azonao atao ny mifantoka amin'ny zavatra manokana toy ny kirarony vaovao na ny fomba fanaingoana ny volon'izy ireo. Atsipazo am-pahatokisana fotsiny ireo ao anaty resaka fa aza manao raharaha lehibe amin'izany.
Tokony hilaza amin'ny olona tianao azy ve ianao rehefa manao firaisana?
Raha manana fitiavana amin'ny olona efa mivady ianao dia tsara kokoa amin'ny ankapobeny ny tsy mampiseho ny fihetseham-ponao. Tsy azo inoana ny mitarika na aiza na aiza ary tena atahoranao tokoa ny hahavery azy ireo amin'ny maha-mpinamana anao satria mety hahatsapa ho tsy mahazo aina izy ireo rehefa manodidina anao hahafantatra ny zavatra tsapanao nefa manana mpiara-miasa ihany koa. Mety hahatsapa ho famadihana azy ireo izany na toa tarihiny ianao.
Ahoana no ahafahanao milaza amin'ny olona tianao fa tsy holavina ianao?
Miala tsiny, fa ny fandavana dia azo atao isaky ny milaza amin'ny olona ny zavatra tsapanao momba azy ireo. Azo antoka, azonao atao ny manandrana miandry mandra-pahazoanao antoka fa tian'izy ireo ianao, saingy mety tsy ho avy mihitsy io andro io satria tsy mamaky ireo famantarana ianao na satria misalasala ny amin'ny toe-tsainao.
Ny tsara indrindra dia ny mivoaka fotsiny milaza azy na dia midika fandavana aza, satria farafaharatsiny afaka manomboka mandroso ianao.
Ahoana no ahafahanao miteny amin'ny olon-tianao fa tianao izy ireo amin'ny lahatsoratra?
Ny fivoahana ary milaza fotsiny ny zavatra tsapanao fa safidy iray - ary tsara izany. Raha tsy izany dia azonao atao foana ny miteny an-kolaka azy ireo amin'ny filazanao hoe manantena ny hahita azy ireo ianao, na ny fahafinaretanao niaraka tamin'izy ireo tato ho ato.
Ny resadresaka an-tsoratra dia tsy mazava toy ny mifanatrika, ka mety tsy hahazo ny hevitry ny hafatrao ilay olon-kafa.
Ahoana no ahafahanao milaza an-tsokosoko amin'ny olona iray tianao?
Tokony hanontany tena ianao hoe maninona ianao no te hiteny mangingina amin'ny olona iray hoe tianao izy. Inona araka ny eritreritrao no ho azonao avy amin'izany? Azo antoka fa afaka mandefa fehezam-boninkazo miaraka amina karatra ianao milaza fa avy amin'ny ‘miafina miafina’ izany, fa raha tsy fantatr'izy ireo hoe iza izany dia tsy ho fantatr'izy ireo ny fahatsapana.
Na dia miahiahy aza izy ireo fa tianao izy ireo, raha tsy fantany tsara hoe iza no nandefa fanomezana ho azy ireo, dia tsy ho afaka handray andraikitra amin'izany izy ireo, raha izany no antenainao fa hataon'izy ireo.
Ahoana no ahafahanao manontany olona raha tiany ianao nefa tsy miharihary?
Raha te hahalala izay tsapan'ny olona momba anao ianao alohan'ny hitenenana aminy ny zavatra tsapanao, dia azonao atao foana ny manandrana miteny toy izao: 'Mahafinaritra ny manantona antsika roa ihany, sa tsy izany?'
Mety hiteny eny na amin'ny fomba hafa izy ireo satria tsy te-hampahatezitra anao izy ireo, fa ny fomba filazany azy sy ny fijerin'ny tarehiny no milaza aminao ny tena zavatra tsapany.
Raha mitsiky be amin'ny endrik'izy ireo izy ireo ary mamiratra ny mason'izy ireo, dia famantarana tsara ny itiavany anao farafaharatsiny. Raha mamirapiratra izy ireo, dia famantarana tsara kokoa noho izany fa tiany ianao.
Ahoana ny fomba handresena ny tahotra fandavana amin'ny dingana 8
Azo antoka fa famantarana ny fitiavanao olona iray dia tsy voavaly (Ary inona no hatao amin'izany)
Famantarana 13 Ataonao Tena Toy ny Lehilahy: Ahoana no Ahazoanao antoka ny fihetsem-ponao
ny fomba anontaniana ny ankizilahy amin'ny fandefasana lahatsoratra
mahatsapa aho fa olona ratsy
maninona no manjaka roman no manjaka roman
ahoana no fahendrena amin'ny resaka iray
oviana ny vola wwe ao amin'ny banky 2019
famantarana an-tsokosoko tia anao ny mpiara-miasa aminao